Ny fonon-tànana dia manamboatra mpanamboatra fitaovana fandroana lomotra | China fonon-tànana manamboatra fitaovana fanaovana fandroana fanorana
Borosy fikolokoloana shampoo alika
1.Tsy mora tazonina sy mety amin'ny tompony izay manome ny fandroana ho an'ny biby fiompy samirery ity borosy fikarakarana shampooing alika ity.
2.Ny borosy fikolokoloana shampooing alika io dia misy volom-bolo malefaka, tsy handratra ny volony sy ny hoditra izany ary azonao esorina mora foana ny volon'ilay biby fiompinao.
3. Amin'ny fitahirizana faribolana kely dia tsy mila manatratra ny shampooing sy savony ianao rehefa mandro ny biby fiompinao. Ity borosy ity dia azo ampiasaina handro ary hanorana ho an'ny alika koa.
4. Mikosoka kely fotsiny ny biby fiompinao, io borosy fikoloana shampooing alika io dia afaka manome foam-be hamela ny alika hadio kokoa noho ny borosy mahazatra hafa.
Borosy mandro fandroana alika
1. Ity borosy fandroana alika mavesatra be ity dia mamafa mora foana ny volo sy ny lint nefa tsy tratry ny kitrokely sy tsy mahazo aina amin'ny alikao. Ny volom-borona vita amin'ny volo dia miova ho toy ny andriamby amin'ny vovoka, vovoka ary volo malalaka.
2. Ity borosy fandroana alika ity dia manana nify boribory, tsy maharary ny hoditry ny alika.
3. Ny borosy mandro amin'ny alika dia azo ampiasaina hanorana ny biby fiompinao, ary hanomboka hiala sasatra eo ambanin'ny fihetsiky ny borosy ireo biby fiompy.
4. Ny lafiny fihazonana tsy mitongilana manaitaitra, azonao atao ny manamafy ny fihazonana rehefa manotra ny alikanao ianao, eny fa na dia ao amin'ny fandroana aza.
Sprayer fandroana alika amin'ny alika
1. Ity sprayer fandroana alika fanasana alika ity dia manambatra borosy fandroana sy famafazana rano. Tsy vitan'ny mandro ho an'ny biby fotsiny izany fa manotra ihany koa.
2.P sprayer alika fanasana arofanina matihanina, endrika miavaka contoured natao hanasana alika amin'ny habe sy karazany rehetra.
3.Adiresy fantsona roa azo esorina, apetraho ary esory mora foana ny atiny sy ny ivelany.
4.Ny sprayer fandroana alika amin'ny alika dia mampihena be ny fanjifana rano sy shampoo raha ampitahaina amin'ny fomba fandroana nentim-paharazana.
Fandroana volo ho an'ny biby fiompy sy borosy fanorana
1.Pet Fandroana volo sy fikolokoloana volo dia azo ampiasaina na mando na maina.
2.Ny fitaovana TPE avo lenta, malefaka, elastika avo lenta ary tsy misy poizina. Miaraka amina endrika mandinika, mora tazonina ary mora ampiasaina.
3.Ny nify lava dia afaka manadio lalina sy mikarakara ny hoditra, afaka manala volo sy loto malalaka, mampitombo ny fivezivezy ao anaty ary mamela ny palitaon'ny biby fiompinao malefaka sy mamiratra.
4.Ny nify toradroa any an-tampony dia afaka manotra sy manadio ny tavan'ireo biby fiompy, paws sns.